Manomboka amin'ny personalization ka hatramin'ny Intelligence ara-pihetseham-po avo lenta | Martech Zone
Olona ambony pahaizana ara-pihetseham-po (EQ) no tiana be, mampiseho fampisehoana matanjaka ary mahomby amin'ny ankapobeny. Hentitra izy ireo ary manana fahaiza-manao ara-tsosialy tsara: mampiseho fahatsiarovan-tena amin'ny fihetseham-pon'ny hafa izy ireo ary maneho izany fahatsiarovan-tena izany amin'ny teny sy fihetsika ataon'izy ireo. Afaka mahita marimaritra iraisana miaraka amina olona marobe izy ireo ary mikolokolo fifandraisana izay mihoatra ny fisakaizana sy ny fahaizana mifankahazo fotsiny.
Izy ireo dia mahatratra izany amin'ny alàlan'ny fanamarihana sy famakafakana ireo nuansa saro-pantarina: fihetsika, feo feo, safidin'ny teny, endrika ivelany - kaody voalaza sy misy dikany izay misy eo amin'ny olona - ary manitsy ny fitondran-tenany mifanaraka amin'izany. Ny mpitsara dia mbola mivoaka amin'ny fomba fikajiana quintessential an'ny EQ, saingy tsy mila fitsapana isika: ekentsika ny olona manana EQ avo ho mpihaino tsara, ireo izay mikolokolo ao amintsika ny fahatsapana fa takatsika, ary iza no mihetsika ho antsika milamina.
Tamin'ny fikarohana nataony momba ny EQ, psikology Daniel Kahneman of Nobel Prize laza hita fa aleon'ny olona manao raharaham-barotra amin'ny olona tiany sy atokisany toy izay olona tsy fantany, na dia manolotra vokatra tsara kokoa amin'ny vidiny ambany aza io olona io.
Alao an-tsaina ange raha mahavita an'io ny marika!
Ny vahoaka ao ambadiky ny angona
Ny tanjon'ny marketing dia ny fahalalana sy ny fahafantarana tsara ny mpanjifa ka ny vokatra na serivisy dia mifanaraka aminy ary mivarotra ny tenany. Guru guru Peter Drucker (tamin'ny 1974!)
Ny fitsipika fototry ny marketing dia ny fahalalana ny mpanjifa tsara kokoa manampy anao hanolotra vokatra sy serivisy tena tadiavin'izy ireo. Ny fahatakarana ny sahan'ny mpanjifa dia efa ampahany tamin'izany foana, saingy tato ho ato ny habetsaky ny fampahalalana ara-nofo misy ho an'ireo mpivarotra no nitroatra.
Ny personalization dia dingana voalohany - fantatray izany satria ny mailaka mandeha ho azy izao dia mampiasa ny anarantsika matetika kokoa noho ny ray aman-drenintsika manokana. Ny fahaizana miantso ny mpanjifa amin'ny anarany sy mampiseho akanjo sahaza ny toetr'andro, ohatra, dia fanombohana tsara amin'ny fanaovana fifandraisana.
Fa raha afaka mijery ny sarin'ny mpanjifanao rehetra amin'ny fahitalavitra ianao, ny personalization dia hampita sary masiaka sy ambany famaritana ambany, nopetahany piksela sivy na roa ambin'ny folo. Hikendry ny pixel maintso ianao amin'ny fomba hafa noho ilay mavo, fa izany dia momba ny haben'ny fahasamihafana ahafahanao mifototra amin'ny fifandraisan'ny mpanjifanao.
Raha mbola mijery ny mpanjifanao ianao amin'ny alàlan'io paradigma misy pixelated io dia tsy eo amin'ny onja manaraka amin'ny revolisiona ho an'ny mpanjifa ianao, manome hery ny marika mba ho mora tohina amin'ny mpanjifany ary haneho faharanitan-tsaina sy toetra amin'ny fomba fifandraisany.
Ny lakilen'ny fanatanterahana famaritana avo kokoa dia ny angona. Ny data-n'ny mpanjifanao dia mitovy amin'ny fihetsika, ny feony, ny atiny ary ny fomba fahitan'ny olona manan-tsaina ny angon-drakitra. Ny fitiavan'ny mpanjifanao, ny filany, ny zavatra ilainy ary ny fisalasalany dia voasokitra ao anaty data avokoa. Saingy mba hamoronana izany fifandraisana manan-tsaina mampihetsi-po amin'ny mpanjifanao izany dia mila ny teknolojia handika izany data izany ho lasa fomba fitondran-tena ianao.
Karakarao ny fanananao lehibe indrindra
Ny teknolojia marketing an'ny mpanjifa manapaka dia manana fahaizana mamoaka sary mihombo sy voafaritra tsara ho an'ny mpanjifanao. Amin'ny maha algorithma sy data Analytics manjary lasa sophisticated kokoa, ireo pixel amin'ny efijery fahitalavitra ireo dia mihakely kokoa hatrany. Tsikaritro tampoka fa ny pixel manga dia tsy manga mihitsy - efatra pixel: maitso, volondavenona, volontany ary manga-manga.
Ankehitriny ianao dia afaka mikendry vondrona mpanjifa voafaritra miha-voafaritra, ny tsirairay miaraka amin'ny hafatra, atiny na tolotra mifanaraka amin'ny safidiny, toerana amin'ny dia nataon'ny mpanjifa, todika sy toe-tsaina. Ary satria ny teknolojia dia manohy manangona sy mamaky angon-drakitra, ny sarin'ireo mpanjifanao dia aseho amin'ny voninahiny voafaritra tanteraka.
Ity dia fifandraisana ara-pientanam-po izay manome fandraharahana mahomby amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fandresena ny fon'ny mpanjifa sy fanampiana azy ireo hikolokolo ny fananana lehibe indrindra ananany - ny mpanjifany.
Tags: pahaizana ara-pihetseham-popersonalizationlasibatra